QAJAARKA BALAKOONKA: SIFOOYINKA KORAYA DHALOOYINKA CAAGA AH - BEER CAGAARAN
Isticmaalka isticmaalka ballaadhan ee karinta, dad badani waxay la yaabaan sida ay u koraan qajaarka on loggias si ay u baabi'iyaan sanadka oo dhan.
Sidaa darteed, qodobkan ayaa ka wada hadli doona sida, meesha iyo goorta la sameyn karo.
Noocyada ku habboon ee qajaarka ee sii kordhaya ee dhalooyinka
Sidee u fiican tahay xilliga jiilaalka ama xilliga gu'ga ee hore si aad ugu jejebiso jikada leh qajaarka cusub oo koray adiga ... balakoonka ama loggia. Si kastaba ha ahaatee, ka hor intaadan kuu sheegin sida loo beerayo qajaarka dhalooyinka caaga ah, waa in aad marka hore sheegtaa in dhammaan noocyada ama boogaha ay ku habboon yihiin tan.
Xaqiiqdu waxay tahay in guntiga ama balakoonka, haddii ay yihiin glazed, waxaa jira dabayl lahayn iyo sidoo kale ma jiraan shinni ah in dhirta dhirta. Oo aan lahayn pollination, waxaa jira ugxan, lahayn ugxan - iyo ma jirto goosashada. Sidaa darteed, si ay u koraan qajaarka on balakoonka, waxaa ugu wanaagsan in la helo is-pollinating ama, sida ay sidoo kale loo yaqaan, noocyada parthenocarpic ama Beelaha. Tani, tusaale ahaan, Beelaha noocan ah ee qajaarka, sida "Abriil", "Buian", "Jarmal", "Brownie". Laakiin haddii aad rabto inaad noqoto naftaada doorka shinni, adigoo isticmaalaya suuf, waxaad u baahan tahay inaad hesho miraha qadarka salad qajaarka - "Pickling", "Brigadier", "Phoenix", "Kustovoy" iyo kuwa kale.
Qajaarada qajaarka beerta, waa in la ogaadaa asxaabtooda "deriska": digir, dill, broccoli, celery, Kaabashka Peking, salaar, radishes, xididdo, asparagus, isbinaajka iyo basasha.
Sida loo doorto meel si ay u koraan
Si kastaba ha noqotee, dookha aadka u saaran qajaarka dhalada shan litir ah kuma filna. Halkan waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ogaato sifooyinka dhaqanka sida qajaar. Sidaas, gaar ahaan, qajaar waa dhaqanka jilicsan oo ka cabsanaya qabyaalada iyo qabow. Oo sidaas daraaddeed, si ay u koraan qajaarka on balakoonka, waxay yeelan doontaa in ay noqon wax yar oo dib u qalabaysan.
Ma taqaanaa? Ereyga Jarmalka Max Max Fasmer oo ku qoran ereyga qarsoodiga ah ayaa muujiyay in magaca "qajaarka" laga soo qaatay luqada Giriigga dhexe, taas oo "ἄωρος" macnaheedu yahay "macquul", taas oo ah, khudraddani waxa la cunay qaab qaab liin ah.
Cucumber waa warshad wakhti dheer oo iftiin leh, sidaa darteed maahan meel keliya oo loo baahan yahay meel kasta oo ay iftiimiso iftiinka qoraxda, laakiin iftiin dheeraad ah ayaa loo baahan yahay. Warshadu ma noqon karto supercooled, sidaas darteed waxaad u baahan doontaa inaad kuleyliso yaryar yar-yar-yar. Waa hagaag, iska hubi inaad si joogta ah u qabatid qolka.
Noocyada sii kordhaya ee dhalooyinka, sida loo abuuro warshad
Ka hor inta aan la beeriinin qajaarka dhalooyinka shan litir, waxaad u baahan tahay inaad si fiican u diyaariso dhalooyin isku mid ah. Asal ahaan, qof walba wuxuu qaataa dhalooyin hufan, laakiin dhalooyin cagaaran ama bunni ah ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa beeritaanka qajaarka.
Si ay qajaarka ku on balakoonka si fiican u qaataan beerista ee dhalooyinka caaga, weelka u baahan yahay si loo diyaariyo si sax ah. Weelka ugu haboon wuxuu noqon doonaa caag biyo ah oo caadi ah, kartida ay ugu yaraan tahay 5 litir. Dhaladaan waa in la gooyaa 2/3. Si aad u hesho cutub guri, waxaad marka hore ku dhejin kartaa xariiq agagaarka calaamadeeyaha kadibna gooyaa.
Ka dib markii cidhifyada dhalada la gooyey ay fiiqan tahay, waxaad sidoo kale u baahan tahay inaad ku rakibto ilaalin si markaa qashinka qajaar la dhaawici karo mustaqbalka. Ilaalinta qashinka dhalada waxaa laga samayn karaa tuubo caag ah oo dhuuban, baaritaan caafimaad, iyo xitaa tuubo dhejis ah. Tuubadan waa in la googooyaa dhinac dhinac ah dhererka oo dhan kuna rido geeska dhalada.
Waa muhiim! Sidaa daraadeed, tuubada ilaalinta ee ku jirta qarka dhalada, marka la gooyey, xitaa ahayd oo aaney jarin, waa marka ugu horreysa lagama maarmaanka u ah fidinta dhererka tuubada dhererka dhererka iyo hagaajinta ciddiyaha.
Sida loo diyaariyo dhulka beeritaanka
Ciidda loogu talagalay qajaarka balakoonka waa inay ahaato mid tayo sare leh iyo marka lagu daro Bacriminta adag. In dukaanka kasta oo loogu talagalay inuu bannaanka iyo bannaanka u iibiyey ciid diyaar ah-ciidda, gaar ahaan lagu duubay bacaha bacaha ee kala duwan. Faa'iidooyinka isku dhafan waa mid isku dheelan.
Laakiin waxaad si madax-bannaan u diyaarin kartaa dhulka. Si arrintan loo sameeyo, qaado miraayad, dhul sodan, peat, balka iyo qoryaha alwaax qiyaas ahaan isku mid ah. Ka dibna ku dar digirta, nitrogen iyo Bacriminta fosfate (5 g mid kasta) si isku dar ah iyo qaso si fiican. Sidoo kale in isku dar ah ciidda, waxaad ku dari kartaa 1 qayb oo ciid ballaaran oo dhoobo ah, vermiculite ama perlite, si loo siiyo hawada hawada iyo kor u qaadida awooda biyaha.
Isla markiiba ka hor beerashada, kormeer miraha la iibsaday. Dhamaan baahida gaarka ah ee loo baahan yahay in laga saaro, iyo waa in la daaweeyo si wanaagsan oo buuxa oo leh xal casaan oo caan ah sodium permanganate.
Haddii baakada aad ku aragtay iniinyada qajaar ee hore u rinjiray orange, cagaaran, midab buluug ah ama midab kale, miraha noocaas ah laguma dhaqmi karo "potassium permanganate", maaddaama ay horeyba uga shaqeyn jireen xarun gaar ah.
Nidaamka beeritaanka qajaarka dhalada caaga ah
Beerka ugu fiican ee qajaarka ku jira dhalooyinka shan litir waa sida soo socota: u qaad 3-5 miraha qajaarka oo ku sii qoto dheer carrada qoyan 2-3 santimitir. Qajaarka dhirta wuxuu noqon karaa saddex xagal, goobo ama goob jeeg ah. Buuxi sanduuqyada dhulka leh, xoogaa hoos u riix calaacalkaaga ama alooshadaada oo si tartiib ah ugu shub biyo diirran.
Ma taqaanaa? In Sanskrit, magaca dalagga qudaarta "qajaar" waa qadarin magaca magaca Prince Bout ee Hindiya. Sida laga soo xigtay legends, Bout wuxuu lahaa lixdan kun caruur ah, taas oo ah sababta uu loo tixgeliyo qadarin iyo "badan oo seeded."
Sida loo daryeelo qajaarka dhalooyinka
Ka dib markaad beertid, ku dabool dhalada iyada oo la googooyey qayb ka baxsan la'aan ah (hawo). Dhiroonka waa dhir udgoon oo kuleyl u kulul, sidaas darteed ka hor biqilka balakoonka waxaa lagama maarmaan ah in lagu hayo heerkulka 25-30 ° C, iyo habeenkii si loo yareeyo 20 ° C. Wakhti ahaan, waxaad u baahan tahay inaad si tartiib ah u dabciso carrada oo aad soo ururiso caws. Biyaha sida ciidda u engegan.
Dabcan, qajaarka sii kordhaya ee dhalooyinka waa mid sahlan oo faa'iido leh, laakiin Si aad u wanaagsan goosan aad u baahan tahay si habboon u sameeyaan baadiyaha. Haddii aad dooratay noocyada kala duwan ee qajaarka (qashin-sifeyn) noocyada qajaarka, ka dib, sida caadiga ah, geedo iswada leh oo laamo la gooyo iyaga ayaa laga sameeyay. Oo haddii ay noocyo beey-pollinated ama Beelaha la beeray, ka dibna waxay u baahan yihiin inay sameeyaan qanjaruufo. Waxaa sidan loo sameeyaa: marka caleen joogta ah oo joogto ah (joogta ah) ay u muuqato, waxaa gebi ahaanba la gooyaa biqil. Qiyaastii toddobaad ka dib, caleemaha lateral waxay bilaabi doonaan inay ka sameeyaan burooyinka axillary, taas oo ay tahay in la isku xoqo si isku mid ah.
On windowsill, waxaad sidoo kale kori kartaa dhirta sida dill, isbinaajka, scallions, dabiiciga ah, rosemary, arugula, basil, tarragon iyo watercress.
Cucumber waa dhirta fuushan waana lagama maarmaan in la xiro cagaha la sameeyay. Si taas loo sameeyo, jiid xarkada dhererka qiyaastii 1.5 mitir ka soo wareegga masaasadda dhirta. Xadhig xadhig u dhaji xadhigga oo hoos u dheji, xidhxidhaan hoose ee stem of qajaar, kaas oo waa in loo rogaa wareega this dhowr jeer.
Waraabinta qajaarka sii kordhaya si joogto ah ayaa loo fuliyaa, iyadoo la siinayo gobolka carrada. Laguma talinayo in maalin kasta laqalmo qajaarka, sababtoo ah tani waxay keeni kartaa kallana yaryar. Inta lagu jiro qajaarka fruiting waxay si firfircoon u isticmaalaan qoyaan, markaa muddadan oo ah tirada waraabka waa in la kordhiyaa.
Waa muhiim! Waxaad u baahan tahay inaad hubiso in qajaarka ku yaal balakoonkaagu aanu ku dhicin qorraxda tooska ah, taas oo gubi karta dhirta.
Ka dib markii ay soo baxaan sprouts waa inay gudbaan laba toddobaad, ka dibna waxaad bilaabi kartaa inaad ku quudiso dhirta. Dharka ugu sareeya waxaa loo samayn karaa sidan: 5 g oo amooniyam iyo magnesium sulfate, 15 g oo ah nitrates amase kalluunka 30 g oo ah superphosphate ayaa loo qaadaa 10 litir oo biyo ah. Waa lagama maarmaan in si taxadar leh loo quudiyo, hubso in xal bacriminta uusan ku dhicin caleemaha.
Cayayaanka caadiga ah ee qajaarka gudaha
Qajaarka koraya ee dhalooyinka caaga ah ee balakoonka, nasiib daro, had iyo jeer ma ilaalin karaan dhirta cayayaanka. Badanaa, qajaarka waxay saameeyaan caarada caarada, aphids iyo whiteflies.
Caarada caarada ayaa cirridka caleemaha ku dhufta, taasoo keenta in ay noqdaan marble-pom. Waraabinta joogtada ah waxay ka ilaalin doontaa dhirta cayayaankan.
Afkaarta cagaaran ayaa saameeya miraha, ubaxa iyo ukunta qajaarka. Xabbad xabbadeed ayaa kaa caawin doonta inaad la dagaallanto cayayaankan, waxay u baahan yihiin inay si fiican u dhaqaan geedka.
Maaddaama qajaarka ay yihiin dhirro qajaar ah iyo miro ay u koraan si dhakhso ah, waxaad u baahan tahay inaad soo goosato 2-3 maalmood oo kasta, ka hortagga qajaarka soo koraya.
Faa'iidooyinka beeritaanka qajaarka dhalooyinka
Faa'iidooyinka khudaarta sii kordhaya ee dhalooyinka caaga ah waxaa ka mid ah:
Tara - waa iftiin oo raaxo leh.
Qajaarka dhalooyinka ku jira meeshiisii ​​ugu yarayd sababtoo ah xaqiiqada ah in 2-3 geedo ay si fiican ugu kori karaan hal dhalo.
Biyuhu dhaqaal ahaan waa la wada baabbi'iyey - wuxuu si toos ah ugu tagaa xididdada qajaarka.
Geedaha xididada ayaa si ammaan ah looga ilaaliyaa cayayaanka beerta sida cawska.
Maqnaanshaha dhammaystiran ee cawska oo kashaqayn kara horumarka qajaarka.
Xayawaanka ayaa sannad walba isbeddelaya, si aysan u ururin bakteeriyada waxyeelada leh.
Qajaarka koray dhalooyinka ku yaal balakoonkaaga waxay kuu keeni doontaa ma aha oo keliya dhadhamin, laakiin sidoo kale ku qanacsanaanta sheeko. Cuntada qajaar cagaaran waxay xasuusin doontaa xagaaga xitaa jiilaalka. Iyada oo ay sabab u tahay hantidooda cuntooyinka, qajaarka waxay qabsadeen mid ka mid ah booska ugu horreeya ee cuntada ee dadka u beddelaya nafaqo ku haboon, ama kuwa ku socda cunto.